Vaovao - Nanangana vola 5 miliara hamongorana ny olan'ny rano fisotro ho an'ny mponina ambanivohitra 10,6 tapitrisa ny "Drafitra Dimy ambin'ny folo taona" an'i Guizhou
Ny "Drafitra Dimy ambin'ny folo iraika ambin'ny folo" an'i Guizhou dia nanambola 5 miliara hamahana ny olan'ny rano fisotro ho an'ny mponina ambanivohitra 10,6 tapitrisa
Ao amin'ny tranokalan'ny "Tetikasa fampitana rano lavitra any New Pipine Anda" ao amin'ny faritany Jinsha, karazana milina fananganana isan-karazany no be atao eo amin'ny toerana misy loharano sy toerana anaovana fantsona mba hahazoana antoka fa ny tetikasa lehibe dia vita amin'ny faran'ny ny taona.
Ny tetik'asa fanaterana rano fantsona lavitra be lavitra any amin'ireo tetik'asa fiarovana ny rano fisotro any ambanivohitra any amin'ny faritanin'i Guizhou, rehefa vita, dia afaka mamaha ny olan'ny fiarovana ny rano fisotro amin'ny olona 69 900 ao amin'ny Tanànan'ny Anluo, Kaomina Datian, ary Tanàna Xinhua ao amin'ny faritany Jinsha.
Ireo mpiara-miasa amin'ny departemantan'ny fisotroana olona ao amin'ny sampana misahana ny rano dia nilaza fa misy tetikasa fisotroana olona mihoatra ny 100 eo an-dalam-pananganana toy izao.
Nandritra ny vanim-potoana "Drafitra Dimy ambin'ny folo iraika ambin'ny folo", na dia 6,15 tapitrisa aza ny olona voalahatra ho amin'ny drafitra «Quenchst Quenching», raha ny marina, dia nisy mponina ambanivohitra 10,6 tapitrisa nanana rano fisotro ratsy tao amin'ny faritany, nanao veloma ny rano fisotro noho ny ny fampiharana ireo tetikasa fisotroana olona isan-karazany.
Nanomboka tamin'ny taona 1996 ka hatramin'ny 2004, ny faritany Guizhou dia nampihatra dingana roa tamin'ny “Tetikasa faniriana” sy “Tetikasa fanampiana ny fahantrana”, izay nanampy olona ambanivohitra 18 tapitrisa mahery tao amin'ny faritanin'i Guizhou “nangetaheta”, fa ny fanadihadiana sy ny tombana tamin'ny 2005 dia nampiseho fa 23 tapitrisa olona ambanivohitra ao amin'ny faritanin'i Guizhou Ny mponina dia mijaly amin'ny rano fisotro tsy azo antoka.
Nanomboka ny taona 2006, nanomboka ny fananganana injenierna fiarovana ny rano fisotro any ambanivohitra any Guizhou. Ny "fampiasam-bola iraisana ambaratonga telo" dia namorona rojom-bola famatsiam-bola matanjaka, nahatonga ny vanim-potoana "Planina Dimy Taona faha-11" ho vanin-taona nitombo haingana sy mandaitra indrindra amin'ny asa fiarovana ny rano fisotro any ambanivohitra any amin'ny Faritanin'i Guizhou.
Antenaina fa amin'ny faran'ity taona ity dia hampiasa vola 4.944 miliara yuan amin'ny tetikasa fisotro rano any ambanivohitra ny faritany. Anisan'izany, ny governemanta foibe dia nanambola 3,012 miliara yuan, ary ny fandaminana ara-bola tety amin'ny faritany ho an'ny 1,546 miliara yuan dia nahazo tombony ho an'ny fampiasam-bolan'ny tantsaha sy renivohitra misy fihenam-bidy mihoatra ny 300 tapitrisa yuan.
Amin'izao fotoana izao, ny Faritanin'i Guizhou dia manatanteraka ny "Drafitra Dimy ambin'ny folo ambin'ny folo taona" momba ny drafitry ny fiarovana ny rano fisotro any ambanivohitra any amin'ny faritany, izay nanimba sy nampihatra ny asa fiarovana ny rano fisotro an'ny olona ambanivohitra 2 ka hatramin'ny 3 tapitrisa ao amin'ny faritany nanomboka ny taona 2008 hatramin'ny 2012 isan-taona, ary ataovy iray taona mialoha ny famolavolana tetikasa tsirairay sy ny drafitra fampiharana ankapobeny.